Umhlahlandlela Wephrofayili we-LinkedIn: Umhlahlandlela Wokubuka Okugcina ku-Mastering LinkedIn
NgoLwesibili, ngoFebhuwari 9, i-2021 NgoLwesibili, Januwari 11, 2022 Douglas Karr
Kukhona ithani lesiphithiphithi njengamanje emkhakheni wezamabhizinisi. Ngibonile mathupha amabhizinisi amancane amaningi achitha izinsiza zokumaketha kulo lonke ubhadane nokukhiya okuhlobene nakho. Ngasikhathi sinye, noma kunjalo, bengilokhu ngibheka izinkampani zamabhizinisi zilwela ukuthola ithalente nobuchwepheshe obunolwazi.
Bengiluleka ngokwami ​​abantu abaningi embonini yami ukuthi basuse ukugxila kwamaphrofayili abo we-LinkedIn kanye nesipiliyoni ezinkampanini ezinkulu. Kunoma yikuphi ukuntengantenga komnotho, izinkampani ezinamaphakethe ajulile zibona amathuba okutshala imali, ukuqasha, nokuzilungiselela isigaba sokukhula esilandelayo. Amabhizinisi amancane awanazo izinsiza zokwenza lokhu.
Sesivele sishicilele izinkombandlela ezimbalwa ze-infographic ku Amaphrofayli we-LinkedIn, kuhlanganise Izeluleko Zephrofayili ye-Linkedin nokwandisa i Iphrofayili ye-LinkedIn Yokuthengisa Komphakathi, kepha lokhu Ultimate bakhohlise Ishidi kusukela Leisure Imisebenzi kuwumthombo ophelele futhi omuhle wokuqinisekisa ukuthi uyikhulisa ngokuphelele i-LinkedIn yezinethiwekhi nokuseshwa kwemisebenzi.
Ubuwazi ukuthi iphrofayili elungiselelwe ngokuphelele ye-Linkedin inamathuba angama-40 okuthola amathuba emisebenzi?
Umhlahlandlela Wokugcina Wamaphrofayli we-LinkedIn ufaka Izinyathelo Ezi-7
I-Perfect Profile Blueprint - Zitholele umthwebuli zithombe oqeqeshiwe ukuze uthwebule ubuntu obuthile kuleso sithombe, bese ugcwalisa yonke imikhakha i-LinkedIn ekuhambisa kuyo! Izithombe ze-LinkedIn zibeka umbono obalulekile wokuqala.
Osayizi Besithombe - Amasayizi wesithombe afanele abukeka emuhle kunoma iyiphi idivayisi, qiniseka ukulandela imininingwane enikezwa yi-LinkedIn futhi efakwe kuhlu ngezansi ku-infographic.
Ukufinyelela kuzincomo - Uma othile ekutshela ukuthi wenze okuhle kanjani, mcele isincomo nge-LinkedIn! Zizohlotshaniswa nomsebenzi ngamunye owugcwalisile.
Izici ezifihliwe ze-LinkedIn - Joyina Amaqembu, Thatha Amanothi ku-LinkedIn futhi uqiniseke ukuthi ubukisa ngezethulo zakho zeSlideshare lapho!
Tholakala ku-LinkedIn - Yenza i-URL yakho ngendlela oyifisayo, usebenzise izihloko ezenzelwe iziqu zomsebenzi, bese uxhuma emuva kuwebhu nakuzo zomphakathi.
I-LinkedIn Izeluleko Zansuku zonke - Ukunikeza inani, ukwaba izeluleko, ukuxhumanisa inethiwekhi yakho nemikhombandlela, nokuba umphathi omuhle kunethiwekhi yakho kuzokusiza ukuthi ube yinkosi ye-LinkedIn.
Vikela Iphrofayela Yakho - Abantu abaningi ngokwengeziwe baba yizisulu zezikimu zobugebengu bokweba imininingwane ebucayi futhi babhekiswe ekugenceni ngamandla. Nika amandla ukuqinisekiswa kwezinto ezi-2 ukuze abantu bangakwazi ukuduna i-akhawunti yakho.
Uma ufuna isikhundla esisha ngokuphuthumayo futhi ufuna ukukhulisa amathuba akho, ungahle uthande ukutshala imali kuwo I-LinkedIn Premium. Ikunikeza ukubonakala okuningi ngaphakathi kosesho lwangaphakathi futhi ikuvumela ukuthi wenze ukufinyelela okuningi ngalezi zici ezilandelayo:
Imilayezo Ye-InMail - Xhuma kalula nabaphathi bokuqasha.
Ubani Obuke Iphrofayela Yakho - bona ukuthi ngubani obuke iphrofayili yakho ezinsukwini ezingama-90 ezedlule.
Izifundo Zokufunda ze-LinkedIn - Ukufinyelela Izifundo Zokufunda ze-LinkedIn eziholwa ngochwepheshe ezingaphezu kuka-15,000 ukuze ucije amakhono akho noma ufunde okuthile okusha.
Ukulungiselela Ingxoxo - yakha ukuzethemba kwakho futhi ugqame ekuqasheni abaphathi ngemibuzo ephezulu yezingxoxo, izimpendulo zengxoxo ezivunyiwe ngochwepheshe, nokuningi.
I-Infographic by Leisure Jobs, ikhaya lokungenisa izihambi, ezemidlalo kanye nemisebenzi yokuthengisa e-UK.
Tags: imisebenzi yokuzilibazisaLinkedInokuqukethwe kwe-linkediniphrofayli ye-linkedinumhlahlandlela wephrofayili we-linkedinUkulungiswa kwephrofayili ye-linkedinamathiphu wephrofayili we-linkinnokwandisa ukuxhumana
Ungahlola kanjani kalula, ubheke futhi ulungise izixhumanisi eziphukile ku-WordPress
Mar 23, 2016 ku-1: 57 AM
Lokho kufanele kube okuKUDE ... Ngangisho i-infographic ephelele kunazo zonke! 😉
Mar 23, 2016 ku-9: 23 AM
Ngazi kahle? Kodwa ngangenziwa umyalezo. 🙂
Ngo-Apr 1, i-2016 ku-1: 38 AM
UDouglas, okuthunyelwe okumnandi!
Ukubuka okuhle okuchazayo kwabasebenzisi be-LinkedIn abafuna ukuthuthuka emsebenzini.
Ngo-Apr 1, i-2016 ku-8: i-43 PM
Ngo-Apr 30, i-2016 ku-2: 45 AM
Ngiyabonga, ibhulogi yakho iyasiza kakhulu.